Dryfree kunyanya anotengesa dehydrator, zuva dryers, kupisa pombi Dryer michina uye rezuva + kupisa pombi Dryer.
Simba Kuchengetedza Solar Heat Pombi Chibereko Kuomeswa Display
Simba Kuchengetedza Solar Heat Pombi Chikafu Dryer Dispaly
40-60kg Yakabatanidzwa Solar Mhuri Dryer
300kg Dzimba Solar Heat Pump Pombi
800kg Yekutengesa Heat Pump Dryer
1500kg Yakasarudzika Commerce Dehydrator
Zvibereko Kuoma Uye Dehumidify Machine
Yakakwirira Dehumidify Hove Dry Machine
Ruva Kusvina neNzvimbo Yekudzorera Mvura
Industrial Paper Tube Kana Wood Dry Machine
Industrial Sludge Dry Uye Dehumidify Machine
Solar + negadziriro yeparutivi Heat Pump Dryer Machine
Yakazara-Yekutangisa Heat Pump Dry System
Steam-Ita CPC Solar And Heat Pump Machine
Solar mvura heater
Solar pv chigadzirwa
Fruit Kuomesa Machine
Flowers Kuomesa Machine
Agricultural Products Kuomesa Machine
Herbs Kuomesa Machine
Nuts Kuomesa Machine
Meat Products Kuomesa Machine
Seafood Kuomesa Machine
Industrial Products Kuomesa Machine
Food dehydrator apuro Chips
Vegetables Kushaya mvura mumuviri Machine
Solar Energy Vegetables Kushaya mvura mumuviri Machines
Commercial Fruit Zvino Muriwo Dehydrator Machine
zvekurima groundnut Dryer
groundnut nokuomesa Machine mugadziri
Agricultrual groundnut nokuomesa Machine
The Dryer nemvura kupora maitiro ane chaiyo design kuchengeta dzinongoitika ruvara nokuda yaoma products.At iyoyowo, richitivimbisa chigadzirwa unhu kusvika kare yezvirwere bvunzo pamwe mutema-zvokudya standard.The mvura kupora hurongwa anogona kupora vanenge 40% zvakawanda kana zvishoma zvinokosha mafuta.
1.Equipment pa chikwata kubudiswa vanokwanisa muna 600-700kg namaruva.
2.The processing nguva mudziyo mumwe nomumwe rinodzorwa mukati 18hours.
3.The nokuomesa tembiricha iri midziyo inofanira kuchinjwa anonzwisisa pakati 30degrees uye 65degrees, uye tembiricha dzinofanira zvakarurama kudzorwa.
4.The yose mhepo inopisa wokufambisa hurongwa midziyo anofanira akagadzirirwa nesayenzi kuitira kuti kuomesa zvinhu akapfeka yunifomu uye hakuna akafa angled.
5.The inopisa gasi zvinoberekwa midziyo panguva kubudiswa uye nokuomesa muitiro nokuva zvinoriumba zvinofanira yaiitwa yakapfupikiswa kunze nenguva manner.Direct neVadzidzi condensing mura (sero mvura) zvinoda kushandiswa 304stainless simbi zvinhu (kusanganisira kupora tireyi, mumwe zvisingakuvadzi mutopota, kuchengetwa dzehondo, etc.) kuitira kuti yaiitwa yakapfupikiswa mvura vasina kusvibiswa.
6.The kutonhora mvura tembiricha kuti achiparadzira kutonhora mvura yaishandiswa condenser riri pazasi 15degrees, mwando iri nyoro gasi kupinda condenser riri pamusoro 50degrees uye mwando kunopfuura 70% isu takanzwa pamurayiro mwando pamusoro gasi pashure condensation kunodiwa kuti airarama anenge 40% isu takanzwa pamurayiro mvura goho reshiyo maruva itsva anenge 40%.
The Dryer nemvura kupora maitiro inogona kushandiswa maruva akaoma, inokosha miriwo uye miriwo.
(1) Flowers: zvakadai ruva, chrysanthemum, Lavender, Jasmine, etc.
(2) Special muriwo: kwakadaro sezvo zuva rehapa, lotus shizha, mindi shizha, etc.
(3) Herbs: poria Cocos, caulis dendrobi, ginseng, etc.
Rose nokuomesa kuBulgaria
Chrysanthemum nokuomesa muna Guizhou
Previous: Steam-Ita CPC Solar And Heat Pump Machine
Next: Air Dryer kuti kuomesa michero uye miriwo / mabhanana Chips Dryer Machine
chinhu High tembiricha pamwe dehumidity revatema kupisa pombi yakaoma Machine
rudzi DF / HP-12 / R
Power mabviro mhando 380V / 3N- / 50HZ
compressor chiyamuro simba 12HP
muchiso mupata vhiri kubva America
mhando Closed vortex compressor
Evaporator Hydrophilic aruminiyamu foil ruoko
Condenser Hydrophilic aruminiyamu foil ruoko
Rated kupisa KW 36
Rated iyezvino A 18
Kunonyanyisa tembiricha / yavose sezvavakatarirwa tembiricha ℃ 85/80
refrigerant zvekupfakira vhoriyamu KG 4.5 * 2
Ambient tembiricha ezvinhu ℃ -60
zera Heat pombi hondo (mm) 2500 * 1400 * 1500
Heat pombi mutevedzeri muchina (mm) /
Equipment uremu KG 500
ruzha Db (A) 55
Pedza kunonyanyisa tembiricha ℃ 115
Pedza divi nevezera Mpa ≦ 2.35
Axial kuyerera feni Power (KW) 0.75 * 1 / 1,1 * 1
Air vhoriyamu (M3) 10000-15000
Waterproof chechetere ini
Nyorai kuti yemagetsi kuvhunduka kudzivirira IP * 4
Size rwakashodoka zvendarira /
Standard zvishongedzo Instruction / garandi kadhi / chitupa
1.Providing yakakwirira tembiricha kupisa pombi zvigadzirwa yakaziviswa zvakaisvonaka pfuma uye vaitungamirira rwokugadzira chete.
2.Building wakakwana hwokugadzira nokutsigira maitiro kuburikidza hwokugadzira nokudzidziswa uye kubvunza basa.
3.Supporting kugara kudzokerera nokuchengetedza kuronga.
4.Providing zvikuru-basa munhu Kuongororwa basa kuitira zvakanaka kukurukurirana uye Kufambisa nemakasitoma.
5.Committing pakupa 1 gore akasununguka chigadzirwa garandi nguva uye tsamba kupembedza nhengo.
6.Gradually kutsvakurudzwa & kukura uye upgrading zvigadzirwa, ano uye mhinduro.
Dryfree nguva dzose chinozadzwa akagadzirira kupa iwe basa redu. We akupe kupembedza chikamu pabasa kwemaawa 24 pazuva saka unogona vatangezve kugadzirwa nokukurumidza uye nenguva chete Fittings nenguva yaipiwa nesu. Tinogona kununura inowanzoshandiswa Fittings kubva yokuchengetera zvinhu kwedu Dongguan iri kuitika day.And nesuvo tinogona kubvunza mumiririri wedu uye vadyidzani munharaunda dzakasiyana kuti rubatsiro pashure-sale service.We zvinonyanyozivikanwa ruzivo chirongwa pashure-okutengesa basa utariri uye kurumbidzwa nevatengi.
The zvakaisvonaka, nenguva uye basa pashure-okutengesa basa ndechimwe Dryfree muchiso anoonga modes.
Dryfree achakupa yakanaka pashure-okutengesa basa, pasinei sei yokutengesa nokudiwa dzinoshandurwa. Kamwe zvaunazvo Dryfree midziyo, edu mainjiniya pashure-okutengesa basa ichapa kuramba kukoshesa zvinovimbisa kuti inivhesitimendi yenyu.
Wangyeda Technopark, Dongguan guta, Guangdong Province, China.
Link & chiziviso
Chrysanthemum Dryer Machine , Rose Dry Machine , Rose Kushaya mvura mumuviri muchoto , Rose Dryer , Rose Water Recovery Equipment , Bay Leaf Kuomesa Machine ,